Tsy azo antoka ny ho avin’ireo mpitady fialokalofana ao Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy
"Tsy tokony hanome lamosina azy ireo isika"
Voadika ny 25 Desambra 2019 16:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, Italiano, English
Maro be ireo firenena mpifanolo-bodirindrina no nandray ireo Sri Lankey an'arivony maro nadritra ilay ady an-trano naharitra 30 taona nisy tao aminy. Ao amin'ny sary:vondrona mpitsoa-ponenana Sri Lankey Tamil tonga tany amin'ny nosy Rameshwaram any Tamil Nadu taorian'ny fiondranana am-pahasahiana an-tsambo namakivaky ny Palk Straits, 30 miles (48,3 km eo ho eo). Sary avy amin'i Flickr-n'i Climatalk
Sri Lanka, ara-tantara no manolotra fialokalofana ho an'ireo Aziatika Tatsimo sy ireo hafa mandositra ny famoretana tany amin'ny fireneny. Na izany aza, taorian'ilay asa fampihorohoroana fidarohana baomba niseho ny Alahadin'ny Paska tamin'ity taona ity, izay nahitàna andian'olona namono olona mihoatra ny 250 isa tany anatin'ireo fiangonana telo sy trano fandraisambahiny telo tao Sri Lanka, nisy vahoaka nitam-piadiana nanao hetsika famaizana ireo mpifindra monina sy mpitady fialokalofana avy any Pakistana, Afghanistana ary Iran. Araka ny hevitr'ilay mpiaro ny zon'olombelona, Ruki Fernando, efa tsy manaiky ny hisianà mpitady fialokalofana miohatra noho izay efa misy intsony i Sri Lanka ka mandefa azy ireo hiverina any amin'ny firenena niaviany.
Firy ny isan'ireo mpifindra monina ao Sri Lanka ?
Araky ny antotanisa navoakan'ny UNHCR, hatramin'ny 30 Aprily 2019 dia nisy 862 ireo mpitsoaponenana nahazo ny sata maha-mpifindramonina azy ary 829 ireo mpitady fialokalofana (ireo izay mbola miantona ny fangatahany) tao Sri Lanka . Ireo izay nahazo ny taratasy maha-mpitsoaponenana azy moa dia miandry ny famindràna farany azy ireo any amin'ny firenena hafa tahaka an'i Kanadà na Amerika.
Nanoratra tao amin'ny Groundviews ilay mpiaro ny zon'olombelona, Ruki Fernando :
Fantatro ihany koa ny fisian'ireo mpitsoaponenana tafahitsoka tao Sri Lanka nandritry ny taona maro na teo aza ny fahazoan'izy ireo ilay taratasy maha mpitsoaponenana azy. Avy aminà firenena 15 ao Azia, Afovoany Atsinanana ary Afrika ireo mpitsoaponenana ireo. 1 362 avy ao Pakistana ary 200 avy ao Afghanistana. Misy hafa avy ao Bangladesh, Eritrea, India, Iran, Maldiva, Myanmar, Nizerià, Palestina, Somalia, Sodàna, Siria, Tonizia ary Yemen.
Silamo Ahmadiyya avokoa ny ankabeazan'izy ireo, na dia misy maromaro koa aza ny Kristiana sy Silamo hafa. Niaretan'ireny vondrompiarahamonina ireny ny fandrahonana, fanafihana ary famonoana nataon'ireo vondrona mpanao an-tendro, zara raha nisy ny fiarovana avy amin'ny fanjakana hanoherana ireny fanafihana ireny. Misy mpiaro zon'olombelona, mpanao gazety, blaogera, tsy mpino ary pelaka vitsivitsy ihany koa nahita fialofana tao Sri Lanka.
Ny fiainana amin'ny maha-mpitsoaponenana ao Sri Lanka
Tsy mahazo trano avy amin'ny fanjakàna ireo mpangataka fialofana ary tsy tafiditra ihany koa tao anatin'ny rafitra fampianarana teknika na fampianarana asa avy amin'ny governemanta. Omen'ny UNHCR fanampiana mitentina Rs. 10.000 (55 dolara amerikàna) eo ho eo ireo fantatra fa manana ny sata maha-mpitsoaponenana, na Rs 22.000 (122 dolara amerikàna) ho anà fianakaviana iray misy zaza 2 na mihoatra, vola izay tsy ampy hivelomana araka ny tokony ho izy ao Sri Lanka. Ireo mpangataka fialofana kosa tsy mahazo na inona na inona fa tsy maintsy miezaka amin'ny herin'ny tenany.
Araky ny nambaran'i Ruki, manome fitsaboana maimaimpoana ihany ny hopitalim-panjakana saingy zakain-dry zareo indraindray koa ny fanavakavahana :
A Pakistani #Ahmadi #asylumseeker in #SriLanka, a young mother (21-year-old), lost her newborn this morning. Gen. Hospital Negombo is not releasing her baby's body w/o an NOC from Pak HC. If her family can arrange the NOC only then they'll return him
.Pakistane iray #Ahmadi #asylumseeker (mpitady fialokalofana) ao #SriLanka , reny tanora iray (21 taona), no namoy zanaka vao teraka io maraina io.Tsy avoakan'ny Hopitalibe Negombo ny vatan'ilay zaza raha tsy misy ” NOC (Non-Objection Certificate, na taratasy tsy fitsivalànana) avy amin'ny Pak HC”. Raha mba afaka nanao NOC mantsy ny fianakaviany , mety mba naverin'izy ireo ihany ilay zaza.
— Rabia Mehmood – رابعہ (@Rabail26) 24 Aogositra 2019
Famoretana sy habibiana natao an'ireo mpitsoaponenana taorian'ireo daroka baomba ny Alahadin'ny Paka
Vakio ito : Daroka baomba tamin'ireo fiangonana sy hotely maro niteraka horohoro tao Sri Lanka
Nanoratra mikasika ny fomba fitondra atao an'ireo mpitsoaponenana sy mpangataka fialofana ao Sri Lanka i Ruki Fernando :
Niaraka tamin'ireo Slamo Srilankey, nizaka lanjan'ny famoretana sy fankahalàna ireo vitsy an'isa mpitsoaponenana sy ireo mpitady fialokalofana, indrindra ireo fa tao amin'ny manodidina an'i Negombo, taorian'ilay daroka baomba ny Alahadin'ny Paska. Nisy tamin'ireo mpitsoaponenana sasany no voakasi-tanana ary nisy no niaritra fampitahorana satria teo amin'ny ampahatelon'ireo mpitsoaponenana no noroahana hivoaka ny efitrano nofain'izy ireo avy. [..] Slamo Pakistaney Ahmadiyya avokoa ny ankabeazan'ireo voaroaka ary nitady fialofana tao amin'ny Maoske Ahmadi. Ny sasany nanorim-ponenana tany anaty garazy fitoeran'ny fiarakodia sy ny lavaranganan'ny Biraon'ny polisy tao Negombo. Tsy zaka ny hatsiaka amin'ireo toerana ireo mandritra ny volana Aprily sy May.
Mpangataka fialofana nafindra avy tao #Pakistan, #Afghanistan ary #Iran no noroahina hiala tao amin'ny tranon'izy ireo noho ny fandrahonana valifaty taorian'ilay #EasterAttack (fanafihan ny andron'ny Paska) natao an'ireo #Kristiana. Manasoketa olona maro tsy manantsiny noho ny zavatra nataon'olombitsy.
— Piyumi Fonseka (@Piyumi_Fonseka) 25 Aprily 2019
Tsy misy ny rariny sy ny fandraisana andraikitra amin'ireo fanafihana manjo ny mpitsoaponenana
Tanaty tatitra iray, Tsy tony any an-tanindrazana, tsy tony any ivelany: ny andraikitr'ireo Fanjakàna manoloana ny mpitsoaponenana sy mpangataka fialofana ao Sri Lanka, nanamarika ny Amnesty International fa tsy manome fiarovana sy fepetram-piainana sahaza ny maha-olona ho an'ireo mpitsoaponenana sy mpangataka fialofana ireo manampahefana ao Sri Lanka, no sady tsy nanao fanadihadiana momba ireo herisetra sy fandripahana natao azy ireny, na efa volana enina taty aoriana aza.
Tohinkevitra: 👉Ny volana May , niresaka tamin'ireo mpitsoaponenana sy mpitady fialofana avy ao #Afghanistan,#Pakistan, #Iran izahay, mikasika ny fampitahorana sy herisetra natrehan'izy ireo taorian'ilay fanafihana azy ireo ny volana Aprily tao #SriLanka. Vakio ireto tatitra etsy ambany mikasika ny fampitahorana miaraka amin'ny fanazavana misimisy kokoa. Amin'ny alalan'ny @amnestysasia https://t.co/JFmI4VM32n https://t.co/vVnLBJlZS0
— Samira Hamidi (@HuriaSamira) 21 Novembra 2019
Sri Lanka : tsy misy fanadihadiana na fandraisana andraikitra tamin'ireo fanafihana mpitsoaponenana sy mpialokaloka https://t.co/4Xn8FN3JkM pic.twitter.com/X6tMBcG3UV
— Northern Resistance Media (@nrmediadotorg) 2 Novambra 2019
Tsy tafiditra ao amin'ny firenena intsony
Nitatitra tranga iray tao amin'ny Groundviews vao tsy ela akory izay i Ruki Fernando, izay nahitàna fianakaviana Pakistaney nangataka fialokalofana, saingy tsy navela hiditra tao Sri lanka :
“Miangavy, vonjeo ny fianakaviako, miangavy indrindra” io no hafatra voaraiko avy aminà namana iray Pakistaney tamin'ny herinandro lasa teo. Mahakasika ny fianakaviany ahitàna olona fito izany, zaza 3, nandositra an'i Pakistana noho ny fanenjehana azy ireo amin'ny maha-kristiana azy. Ny marainan'ny 25 Oktobra izy ireo no tonga tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Katunayake , nikatsaka fitoniana, kanefa dia voasambotra ary naverin'ireo mpiandraikitra ny fifindramonina tao Sri Lanka ny alin'ny 28 Oktobra.
Nanao izay ho afany tamin'ny fiantsoana ireo olona ambony fantany i Ruki hanakanàna ny fandroahana ireo fianakaviana roa ireo. Hoy izy manampy :
Tamin'ny alalan'ireo namana, niresaka tamin'ireo politisiana mpikambana ao amin'ny governemanta ihany koa aho, isan'ireny ny Praiministra. Sahirana amin'ny fanaovana propagandy hono ry zareo ka mety hanelingelina ny firotsahan'ny kandidàny ny fanampiana ireo fianakaviana ireo, izay no valinteny azoko.
Pakistani nationals should avoid traveling to Sri Lanka nowadays, they’re more likely to get deported back to Pakistan because of the number of Pakistani Asylum seekers and refugees living in Sri Lanka, as a pre-caution contact the Sri Lankan high commission for further enquiries.
Tokony ho fadian'ireo teratany Pakistaney mihitsy aloha ny fitsidihana an'i Sri Lanka amin'izao fotoana izao, mety ho averina any amin'ny tany niaingany any Pakistana mantsy izy ireo noho ny fisian'ireo mpitady fialokalofana marobe sy ireo mpitsoaponenana monina ao Sri Lanka, mba ho fisorohana mialoha, mifandraisa mivantana amin'ny kaomisiona ambony ao Sri Lanka raha te-hahazo fanazavana fanampiny.
— MOIN.(@HolyMoin) 31 Jolay 2019
Joshua Castellino, Tale mpanatanteraka ao amin'ilay fikambanana iraisam-pirenena Minority Rights Group International, nanambara fa :
Atahorana izany hamotika ny lazan'i Sri Lanka amin'ny maha-firenena mahay mandray ireo olona mandositra fanenjehana azy. Tokony handray haingana fanapahankevitra ireo manampahefana mba hiantohana ny fiarovana, ny haja sy ny zon'ireo mpitsoaponenana ary ireo mpitady fialokalofana, amin'ny fiantohana ny fitonian-dry zareo sy ny hananan'izy ireo fepetram-piainana mifanaraka amin'ny maha olombelona azy.
Manana ny tantarany manokana eo amin'ny resaka olona nafindra toerana ihany koa i Sri Lanka, satria efa maherin'ny 800 000 ireo olona nitady fialofana tany amin'ireo firenena hafa tao Azia Atsimo sy lavitra noho izany, ary efa nandritry ilay ady an-naharitra 30 taona . hoy i Ruki Fernando naneho hevitra :
Tsy mpifidy ireo mpitsoaponenana ireo, kanefa olombelona koa ry zareo. Tsy tokony hanome lamosina azy ireo ny politisiana, ny antoko politika ary isika amin'ny maha vahoaka Sri Lankey antsika, fa handray, hanohana ary hikarakara azy ireo raha manantona antsika ry zareo hangataka fialofana vonjimaika.